Warbixinta Shirka Xaqiijinta Da'da - Aasaaska Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Warbixinta Shirka Xaqiijinta Da'da
Khubaro caalami ah ayaa eegta xaqiijinta da'da loogu talagalay goobaha fiidyowga ah
1.4 milyan sababa oo ficil loo sameeyo
Tirada carruurta aragtid qaawan ee Boqortooyada Midowday bil kasta
John Carr, OBE, Xoghayaha Isbahaysiga Hay'adaha Samafalka Carruurta ee UK ee Amniga Internetka oo ay weheliso The Reward Foundation, ayaa daabacay warbixintii ugu dambeysay ee Shirka Caalamiga ee Xaqiijinta Da'da kaasoo dhacay Juun 2020. Munaasabadda waxaa ka mid ahaa u doodayaasha daryeelka carruurta, qareenno , aqoonyahanno, saraakiisha dawladda, cilmiga neerfaha iyo shirkadaha teknolojiyadda oo laga soo kala qaatay sagaal iyo labaatan dal. Shirka ayaa dib loo eegay:
Caruurtu waxay xaq u leeyihiin in laga ilaaliyo waxyeelada isla markaana dawladaha ayaa leh waajib sharciyeed inay bixiyaan. Waxaa taas ka sii daran, carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay helaan talo wanaagsan oo ay ku helaan waxbarasho dhammaystiran, da'da ku habboon oo ku saabsan galmada iyo qaybta ay uga ciyaari karto cilaaqaad caafimaad leh, faraxsan. Tan waxaa sifiican looga bixiyaa xaalada guud ee qaab dhismeedka caafimaadka iyo waxbarashada. Caruurtu xaq uma leh sharci sharci ah in ay ugaarsadaan.
Tikniyoolajiyadda xaqiijinta da'da ayaa horumartay illaa meesha ay ka-buuqsan karto, nidaamyo la awoodi karo ay jiraan oo xaddidi kara marin-u-helidda 18 jir ka hooseeya goobaha galmada internetka. Tani waxay sameyneysaa iyada oo isla mar ahaantaasna xushmeynta xuquuqda gaarka ah ee dadka waaweyn iyo carruurta.
Xaqiijinta da'da ma aha xabbad qalin ah, laakiin runtii waa rasaas. Waana qoraal loogu talagalay in si toos ah loogu diido bahda internetka ee sawir-qaadeyaasha qaawan ee dunidan door kastoo ay ka qaataan go'aan ka gaarista is dhexgalka galmada ama waxbarashada galmada ee dhalinyarada.
Arrinta kaliya ee laga qoomamoodo ee Boqortooyada Midowday waqtigan xaadirka ah ayaa ah wali wax fikrad ah kama hayno goorta tallaabooyinka xaqiijinta da'da ee uu baarlamaanku ogolaaday sannadka 2017 uu dhaqan geli doono in kasta oo toddobaadkii la soo dhaafay go'aanka maxkamadda Sare ayaa laga yaabaa inay horay noogu dhaqaaqdo.
Press Nala Xiriir
John Carr, OBE, wixii faahfaahin ah ee ku saabsan sharciga, tel: +44 796 1367 960.
Mary Sharpe, Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta, ee saamaynta ku leh maskaxda qaangaarnimada,